Adịghị Anya Ndị Ahịa Ọrụ Na-emebi tingzụ ahịa Gị ROI | Martech Zone
Ogbenye Ahịa Ọrụ na-emerụ gị Marketing ROI
Saturday, April 9, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Jitbit, Ebe a na-ahụ maka tebụl enyere aka, ewepụtala ihe omuma a na ọnụ ọgụgụ na-egosi n'ụzọ doro anya mmetụta ndị ahịa dara ogbenye na azụmaahịa. Companlọ ọrụ na-emeso ogbenye ahịa ọrụ dị ka ha mere afọ ndị gara aga… mgbe ndị ahịa na-eji naanị mkpesa na azụmahịa ma ọ bụ obere ndị enyi. Mana nke ahụ abụghị eziokwu nke ụwa anyị bi ugbu a.
Ndị ahịa iwe na-agbachi nkịtị bụ ndị gburu mmadụ
Ndị ahịa adịghị mma na-emebi aha aha gị n'ịntanetị ma na-emetụta nloghachi ahịa gị na ntinye ego. Y’oburu n’inwe ngwa ahia na ntanetị nke juputara na ntule na adighi nma n’okpuru ya, ndi ahia nwere ike iga. N'ezie, 86% nke ndị ọbịa agaghị azụta n'aka ụlọ ọrụ nwere nyocha na-adịghị mma.
Iji meziwanye ndị ahịa gị n'ọtụtụ, JitBit na-atụ aro ka ụlọ ọrụ meziwanye mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ ọrụ na ndị ahịa, nye ọzụzụ ka mma iji zere ndị ọrụ na-enweghị ọrụ, ma nyekwa ahụmịhe na-agbanwe agbanwe gafee ọwa ọrụ ndị ahịa niile - nke gụnyere ekwentị, email, nkata ndụ, ọgbakọ. , nkwado pịa-oku na ọbụna mgbasa ozi mmekọrịta. Ha na-akowa ihe Wzọ Ọjọọ 11 Ndị Ahịa Ahịa Na-eme Ka Line Na-ere Ọkpụkpọ Gị na post ha:
Enweghị ike - Azụmahịa kwesiri ka enwere ike ị nweta ma na-anabata ọwa niile.
Speed - Onweghị ihe na-akụda ndị ahịa azụ ka ichere enyemaka.
Ihe ọmụma - ndị ọrụ na - enweghị ike inye aka gafere iwe.
Arụmụka - ịgbalị imeri n’ọgụ na-eme ka azụmahịa banye n’agha ahụ.
nkwa - imebi nkwa na-emebi ntụkwasị obi, ọkara ụlọ ọrụ niile na-emebi nkwa.
Records - oku ugboro ugboro na ịkọwa nsogbu ugboro ugboro oge ọ bụla na-achụpụ ndị ahịa mkpụrụ.
Personalization - n’amataghị onye onye ahịa gị bụ, uru ha bara, nka ha, na atụmanya ha hapụrụ ụlọ ọrụ n’azụ.
na-ege ntị - inwe imeghachi nsogbu ahụ ugboro ugboro abaghị uru ma mee ka afọ ojuju ghara ịdị.
Na-eso - mgbe ị na-ekwu na ị ga-agbaso, soro.
Ndị Ọrụ Rude - n’agbanyeghi ubochi ndi oru gi n’enwe ihe ojoo, odighi ihe gha ewepu ndi ozo n’azu ahia.
Gbaa Gburugburu - ibufe ma na-egbu oge n’enweghị mkpebi bụ ihe kachasị njọ ị nwere ike ime onye ahịa.
Ala nke ihe omuma a? Site na 2020, ahụmahụ ahịa ga-ahụfe ọnụahịa na ngwaahịa dị ka isi ika iche. Ọtụtụ ụdị dị ugbua, n'uche nke m. Ndị ọchụnta ego na-amụta na ndị ahịa enweghị afọ ojuju anaghị alaghachi, imirikiti anaghị eji ụlọ ọrụ ahụ ọzọ. Mee ka eziokwu ahụ bụrụ na ndị ahịa enweghị afọ ojuju nwere ike ịkekọrịta nkụda mmụọ ha n'ịntanetị n'ụzọ dị mfe, azụmahịa gị na-agakwa nsogbu ma ọ bụrụ na ị naghị azaghachi ma mezie nsogbu ndị a na-ekwu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emeso ndị ahịa ọrụ dị ka ihe ọjọọ dị mkpa mgbe ha kwesịrị itinye ego na ya dị ka ọdịiche dị na ndị na-asọmpi ha.
Tags: ọjọọ ahịa ọrụahụmahụ ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịandị ahịa ọrụ roiọnụ ọgụgụ ndị ahịahelpdeskinfographicjitbitnyocha ndị na-adịghị mmaọrụ ndị ahịa adịghị mmaNyochaROI
Zọ kachasị mma iji jikwaa ọtụtụ akaụntụ Twitter